IPanda kuGoogle kwiThafa yesiNgesi | Martech Zone
I-Google Panda kwisiNgesi esingaqhelekanga
NgoLwesithathu, ngoFebruwari 1, 2012 Douglas Karr
Kunzima ukukholelwa ukuba siza ngunyaka okoko uGoogle watsala i-trigger kuhlaziyo lwe-algorithm olunegama Google Panda. Ayizanga ngaphandle kwezinye Intlungu kuGoogle kwaye, ekugqibeleni, izicwangciso zoku ukufunyanwa kwiGoogle Panda.
Emva konyaka ukukrazula oko iGoogle ibona njengeziza ze "spammy", iPanda ikuchaphazele njani? Kubekho incoko engapheliyo phakathi kwabathengisi be-Intanethi kunye nee-SEO malunga nendlela yokukhusela indawo yakho kwiPanda, kodwa ngalo lonke uhlaziyo kunye nohlaziyo kolu tshintsho lwealgorithm, izinto zinokudideka ngokukhawuleza.
Le infographic, I-Google Panda kwisiNgesi esingaqhelekanga, inokuba yenye yezona zinto zicace gca endizibonileyo kwindalo kaGoogle Panda kunye neengcebiso ezilandelayo kwiinkampani ekufuneka zilandele ngolunya iindlela zokwenza injini yokukhangela.
tags: google pandaipanda algorithm kagoogleUkubuyiswa kwepanda kagoogleI-algorithm yokukhangela kuGoogle
SiyiBlog yezeNtlalontle eziPhambili ezili-10!
Ukwenza ihlombe kwiTinderbox kwi-Super Bowl!